Hatezerana Noho Ny Herisetra Tamin’ny Fisamborana Ireo Mpaka Sary Mpanao Gazety Espaniola Roa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2013 23:10 GMT
Nozaraina be tamin'ny tenifototra hoe #RaúlLibertad tao amin'ny Twitter ireo vaovao momba ny fisamborana ilay mpaka sary mpanao gazety Raúl Capín, tao an-tranony tany Madrid. Fotoana fohy taorian'izay dia nampahafantarina mazava ny tena antony nisamborana azy ” fanakorontanana sy tsy fanajana ny manampahefana.” Voasambotra ihany koa ny mpaka sary mpanao gazety Adolfo Luján. Efa navotsotra avokoa izy ireo.
Niandry ny hahafantatra ny anton'ilay fisamborana ireo mpiserasera malina fatratra ety amin'ny aterineto raha nanameloka io hetsika io kosa ho andrana ataon'ny governemanta ho famerana ny fahalalahan'ny gazety any Espaina ny hafa.
“Satria tsy heloka bevava ny maka sary ny herisetra ataon'ny polisy. Fahafahana ho an'ireo mpanao gazety nosamborina”
Nampangain'ireo gazety lehibe fatra-mpifikitra amin'ny nentin-drazana ao amin'ny firenena ho “mpaka sary mpitsikilo tao anatin'ilay fihetsiketsehana” ary hoe “mpanao fihetsiketsehana mpanakorontana tanteraka ” mihitsy aza i Raúl Capín, izay miasa ho an'ny Diario DID (Gazety dizitaly mahaleo tena) [es] sy ny Mundo Obrero (Tontolon'nyMpiasa) [es].
Mandritra izany fotoana izany, mifanaretsaka ao amin'ny aterineto ny hafatra maneho hatezerana sy fanamelohana ny famoretana atao amin'ny mpanao gazety izay mitatitra ny fikomiana ara-tsosialy. Naneho ny firaisankinany tamin'ireo voasambotra ny vondrona isan-karazany, ny vovonana, ireo haino aman-jery samy hafa ary ny mpanao gazety, toy ny vovonana Fotogracción [es] izay nanao fanambaràna fa vondrona maherin'ny 120 sy olona 250 no efa nanao sonia ho fanohanana izany. Nanazava ny fahitany azy ny La República, gazety amin'ny aterineto :
Tahaka izany no nisamborana ireo mpanao gazety rahalahintsika, izay nentin-dry zareo nogadrainy any an-tranony tahaka ireny olona nanao heloka beveva ireny. Nanana fitaovam-piadiana mamoa-doza toy ny fakàntsary (kamerà) Nikon izy tao an-tranony ao… Toa an'i Raúl, manana fitaovam-piadiana koa isika. Manana fakàntsary hakàna sary sy video, solosaina, ary ny zavatra tena mahatahotra indrindra ho azy ireo, ny faniriana hampita vaovao.
Manome alàlana hatrany hatrany ireo tantara maro izay mifanohitra amin'ny vaovao ofisialy ny tambajotra sosialy sy ny mpanao gazety amin'ny aterineto noho ny fandefasana video sy fanapariahana sary mampiseho zava-marina hafa. Hitantsika ato amin'ity lahatsary ity ny fomba nakàn'ny mpitandro filaminana ny fehin-tànana nentin'ireo mpikambana ao amin'ny fanaovan-gazety mpaka sary izay voasambotra omaly, rehefa nanatrika ny hetsi-panoherana ny fanilikilihana nokarakarain'ny Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Vovonan'ireo izay niharan'ny fanaovana Antoka) manohitra ny fandroahana azy:
Video [es] iray hafa mampiseho zavatra mitovy amin'io fa amin'ny fijery hafa sy ny fomba nanaovan'ny mpitandro filaminana ireo mpanao gazety nanatrika ilay fikomiana.
Tsy vao voalohany izao no nanitsakitsahan'ny governemanta Espaniola ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety, ary tsy amin'ny sehatry ny hetsika ara-tsosialy ihany. Manilika ireo mpanao gazety ny tambajotra tantànan'ny radio sy ny fahitalavi-panjakana Espaniola (RTVE) noho ny antony ambara ho ara-politika. Tamin'ny fiandohan'ny fifidianana solombavambahoaka, nisy lalàna nanova ny fanendrena ny filohan'ny RTVE izay, manombaka izao, dia tendren'ny governemanta ary tsy ilàna fifanarahana amin'ny mpanohitra. Antsoin'ireo izay miasa ho an'ilay vondron'orinasa hoe : “tena mampitaintaina” io fanovàna io satria midika fahaverezan'ny fahaleovan-tenan'ilay tambajotra. Farany teo, notaterin'ny gazety El Mundo ireo latsabato nataon'ireo Espaniola avy amin'ny European Popular Party sady mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana mahakasika ny fanoherany ny tatitra iray momba ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety.
*Hajiantsary avy amin'ny mpaka sary Juan Luis Sánchez ary nalaina tao amin'ny kaontiny Twitter @juanlusanchez.